မင်းသားကြီးနှင့် စာတိုပေစများ: 2012
ဘာမှ မလုပ်ပဲ ရတဲ့ပိုက်ဆံထက်
တောင်းစားပြီးရတဲ့ငွေတကျပ်က ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်...
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ 
အဲငွေတကျပ်မှာ ကိုယ်ရင်းနှီးထားတဲ့ချွေးစက်လေးတွေပါတယ်...
ခေါင်းလေးငုံ့ ထားတဲ့မာနတချို့ ပါတယ်...
လက်ညိုးထိုးကဲ့ ရဲ့ သူတွေရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းတွေပါတယ်...
မယုံကြည်နိင်တွေသူတွေရဲ့သံသယတွေ ပါတယ်...
Posted by မင်းသားကြီး at 05:580comments
“ ဏ ၊ ရ ၊ ဘ ”
မင်းသားသုံးယောက်ဟာ ပညာသင်ယူပြီးလို့ သူတို့ရဲ့ နေရာဌာနသို့
တောအုပ်တစ်ခုကို ဖြတ်ပြီး ပြန်လာခဲ့ကြတယ်.။ တောအုပ်ရဲ့ အလယ်ကိုလည်း
ရောက်ရော တောအုပ်ကို စောင့်နေတဲ့ ဘီလူး အကောင်သုံးဆယ်ထွက်လာပြီး
သူတို့ကို စားမယ် လုပ်ပါလေရော.။
အဌာရသ ၁၈ ရပ်ကို သင်လာတဲ့ မင်းသားတွေပဲလေ.။ အတိုက်အခိုက်ကတော့ တတ်ပါတယ်.။
ဒါပေမဲ့ ဘီလူးတွေက အကောင် ၃၀ တောင်မှ ဖြစ်နေတော့ တိုက်ကြ ၊ ခိုက်ကြရင်
သူတို့လည်း သေကြေမယ်လေ.။ ဒါကြောင့် သူတို့ ဥာဏ်ကိုသုံးပြီး
တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ ဘီလူးတွေကို ပြောကြတယ်.။
“ ဒီမှာ ဘီလူးများ .၊ သင်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို စားမယ် ဆိုရင်လည်း စားပါ.။
သို့သော် ဒီအတိုင်းစားပါက အလွန်ပဲ ပျင်းဖို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်.။ ဒါကြောင့်
ကျွန်တော်တို့ ပျော်စရာ ကောင်းသော ကစားပွဲလေး တစ်ခု လုပ်ကြပါမယ်.။
ဒီကစားပွဲလေးကတော့ အခု ဘီလူးများက အားလုံးပေါင်း ၃၀ ၊ ကျွန်တော်တို့က ၃
ယောက် ၊ အားလုံးပေါင်း အယောက် ၃၃ ယောက်မဟုတ်လား.။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့
ဒီစည်းဝိုင်းကြီးကို ဟိုမှာ ရပ်နေတဲ့ အရပ်အမြင့်ဆုံး ဘီလူးကနေ စပြီး
ကျွန်တော်တို့ ဂဏာန်းရေမယ်.။ ၁၀ ကျတဲ့ နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ လူပဲ
ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘီလူးပဲ ဖြစ်ဖြစ် သတ်ပစ်မယ်.။ ပြီးရင် အဲဒီနေရာကနေ ဆက်ပြီး ၁၀
အထိ ဆက်ရေမယ် ။ ဒီနေရာမှာလည်း လူပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘီလူးပဲဖြစ်ဖြစ်
သတ်ပစ်မယ်.။ ဒီလိုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ ပွဲလေး
ဖြစ်လာလိမ့်မယ်.။ ဘယ်လိုလဲ သဘောတူလား.။ ”
ဒီလို မင်းသားတွေက ပြောလိုက်တော့ ဘီးလူတွေက ပျော်သွားပြီး
သဘောတူလိုက်သတဲ့..။ ဒီမှာ မင်းသားတွေက မြန်မာဗျည်းအက္ခရာ ၃၃ လုံးထဲက
အရပ်အရှည်ဆုံး ဘီလူးကြီးကို “ က ” နေရာမှာ ထားလိုက်ပြီး သူတို့ကတော့ “ ဏ
၊ ဘ ၊ ရ ” နေရာတွေမှာ ဝင်ပြီး ပြိုင်ပွဲကို စတင်လိုက်တယ် ။ ဒီမှာ ၁ ကနေ
၁၀ အထိရေတယ်.။ ၁၀ ကျတဲ့နေရာမှာ ဘီလူးတစ်ကောင်ဖြစ်နေတယ် ။ ဒီတော့ သူတို့
သတ်လိုက်ကြတယ်.။ နောက်ထပ် ထပ်ရေတယ်.။ နောက်ထပ် ၁၀ ကျတော့လည်း ဘီလူးပဲ..။
ထပ်သတ်လိုက်ကြတယ်.။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့ ရေလာလိုက်ကြတာ. ၁၀ ကျတိုင်းလည်း
သတ်လာလိုက်ကြတာ..။ သူတို့ သတ်သူတွေကလည်း ဘီလူးတွေပဲ ဖြစ်နေတယ်.။
နောက်ဆုံးမှာ ဘီလူးတွေ တစ်ကောင်မှ မကျန်တော့ပဲ..။ “ ဏ ၊ ရ ၊ ဘ ” မှာ
နေရာယူထားတဲ့ သူတို့ပဲ ကျန်ခဲ့တော့တယ်.။
တကယ်တော့ ဒါဟာ ထူးဆန်းတော့ ထူးဆန်းပါတယ်.။ တကယ်တော့ မထူးဆန်းလှပါဘူး.။
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ပါဠိဘာသာမှာ “ ဏ - ဘ - ရံ ” ဆိုတာ ” ဘေးမရှိ ” လို့ အဓိပ္ပါယ်
ရှိနေတယ်လေ.။ ဒီတော့ “ ဏ - ဘ - ရံ ” နေရာတွေမှာ ဝင်ပြီး နေရာယူထားမှ တော့
ဒီမင်းသားတွေ ဘယ်လိုလုပ် ဘေးအန္ကရာယ် ကျရောက်တော့မလဲဗျာ.။
“ ဏ - ဘ - ရံ ” ဆိုတာ “ ဘေးမရှိ.။ ” လို့ ဆိုထားတာကိုး..။
ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး.။ သူငယ်ချင်းတွေ အပျင်းပြေ နဲ့ ဗဟုသုတ အနေနဲ့
လုပ်ကြည့်လို့ရတာပေါ့ဗျာ.။ စမ်းကြည့်ပါလား.။ စာရွက်လေးတွေမှာ “ က ၊ ခ ၊ ဂ
” လေးတွေ ရေးပြီး ၁ ကနေ ၁၀ အထိရေကြည့်.။ ၁၀ ကျတဲ့ နေရာကို ဖယ်လိုက်..။
နောက်..အဲဒီနေရာကနေ ဆက်ရေကြည့် နောက်ဆုံးမှာ တကယ်ကို ” ဏ - ဘ - ရံ ”
ဆိုတဲ့ အက္ခရာ ၃ လုံးပဲ ကျန်နေတာ တွေ့လိမ့်မယ်.။ စဉ်းစားစရာပါတဲ့ လက်တွေ့
Posted by မင်းသားကြီး at 14:48 1 comments
Labels: နားထောင်ဖူးခဲ့သော ပုံပြင်များ
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေဖတ်ပြီးသား စာတစ်ပုဒ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ ဒါပေသိ ကျွန်တော့်ဘလော့လေးက
ကျွန်တော့်မှတ်စုလေးလို ဖြစ်နေတာမို့... :)
မိုးသက်လေပြင်းတွေကျနေတဲ့နေ့တစ်နေ့ ပေါ့ ...
သင်က ကားတစ်စီးနဲ့ ဘတ်စ်ကားဂိတ်ရှေ့ ကနေမောင်းသွားမယ်။
အဲဒီမှာ ကားကိုစောင့်နေတဲ့ လူသုံးယောက်ရှိမယ်.. မိုးရေတွေလဲစိုလို့ပေါ့
တယောက်က အရမ်းနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ အဖိုးအို။ သူက ဆေးရုံကို သွားရမယ်။
တယောက်က ဆရာဝန် သင့်အသက်ကို ကယ်ဖူးတဲ့ ဆရာဝန်။ ဒီအခွင့်အရေးနဲ့ ကျေးဇူးပြန်ဆပ်ချင်နေမယ်။
နောက်တယောက်ကတော့ သင်သိပ်ချစ်ရတဲ့ သူ။ သင်နဲ့ လက်ထက်မဲ့သူ။ အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မဆုံးရှုံးချင်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ သင်မောင်းနေတဲ့ ကားက နောက်ထပ်လူတယောက်ကို ပဲ တင်လို့ရမှာ။
သင်ဘယ်သူ့ကို တင်မှာလဲ။ ဘယ်သူ့ကို ရွေးချယ်မှာလဲ။
ဒါကတော့ သင့်ရဲ့စိတ်ကို စမ်းတဲ့မေးခွန်းလေးပါ။ လူတိုင်း သူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ သူဖြေသွားတာပဲ။
အဖိုးအိုကသေတော့မှာမလို့ သူ့ကို အရင်ကယ်ရမယ်။
သင့်ရဲ့ချစ်သူကိုလဲ သင်လက်မလွတ်နိုင်ဘူး။ အခွင့်အရေးဆိုတာ တစ်ခါပဲရှိတာ။
လူတယောက်ကဖြေတယ် ဒါပေမဲ့ သူဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာတော့ သူမပြောသွားဘူး။
“ ဆရာဝန်ကို ကားသော့ပေးပြီး အဖိုးအိုကို ဆေးရုံပို့ခိုင်းမယ် ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့် ချစ်သူနဲ့ ဘတ်စ်ကားအတူတူစောင့်မယ်”
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်အပါအ၀င် တော်တော်များများ ဒီအဖြေကိုစဉ်းစားမိကြမယ် မထင်ပါဘူး။
>>>>ဘာကြောင့်လည်းလို့ မေးရင် ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာ(ကားသော့)ကို မဆုံးရှုံးချင်ကြဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတ္တတွေကို လွှတ်ချကြည့်လိုက်ပါ ပျော်ရွှင်မှု တစ်စုံတစ်ရာ ရနိုင်ကောင်းပါရဲ့<<<<
Posted by မင်းသားကြီး at 14:340comments
တစ်ရက် . . . ဒီက ငါးတန်းကျောင်းသားနဲ့ ခဏတဖြုတ်စကားပြောဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့ ကျောင်းမှာ ဘယ်လိုလဲ လို့မေးတော့ Great! We did Philosophy တဲ့။ ဖီလော်ဆော်ဖီ ဆိုတော့ ဘာတွေသင်လဲ မေးရင်း စိတ်ထဲပေါ်လာတာက ပလေတို တို့ ဘာတို့ အကြောင်းကြားရမယ်လို့ ထင်နေတာ။ ဘယ် ဟုတ်ပါ့မလဲ။ မေးခွန်းတွေ စဉ်းစားရတယ်တဲ့။ လူတွေ ငြင်းကြခုန်ကြတာ ကောင်းသလား။ ဘာလို့လဲ။ ဘယ်လို အကျိုးအပြစ်တွေ ရှိနိုင်သလဲ။ ပိုက်ဆံချမ်းသာရင် ပျော်မယ် ထင်သလား။ ပြည့်စုံမယ် ထင်သလား။ ဒါမျိုး မေးခွန်းလေးတွေ။ အဲ့ဒါနဲ့. . မင့်ဘယ်လိုထင်တုန်း မေးတော့. . . ဆရာသမားကလဲ အလာကြီးပဲ။ It depends တဲ့။ ပိုက်ဆံကို နင် ဘယ်လို သုံးချင်တာလဲ။ ဘယ်လောက် ရှိချင်တာလဲ တဲ့။ အမေးကို အမေးနဲ့ ပြန်လာတာ။ အင်းပေါ့လေ. . ဒီလို အခြေခံပညာရေးပေးတဲ့ ဒီလို တိုင်းပြည် လူမှုအဆင့်အတန်း ကောင်းတာ မထူးတော့ မထူးဆန်းပါဘူး။
သူများ တိုင်းပြည်က ဦးနှောက်ကို သုံးပြီး ရေရေလည်လည် တွေးတတ်ဖို့ ပျိုးထောင်နေချိန်မှာ ကြီးတော်တို့များနိုင်ငံမှာတော့. .
' မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှဧ။် ဆန်အိုးကြီးဖြစ်ပါသည်. . .'
' ၁၈၇- က တစ်ကြိမ်၊ ၁၈-- က တစ်ကြိမ်၊ ၁၈၈၅ တွင် တတိယအကြိမ်မြောက် ကျူးကျော်စစ်ကို ဆင်နွှဲကာ. . . ဗြိတိသျှတို့သည် ... ... ..'
' My name is Kyaw Kyaw. My father name is U Mya. I live in North ----. I have two brothers and sisters.'
' တြိဂံတစ်ခုဧ။် အတွင်းထောင့်သုံးထောင့်ပေါင်းခြင်းသည် ၁၈ဝ ဒီဂရီဖြစ်ပါသည်။'
' ကျွန်မနာမည် မြမြ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မဧ။် အဖေနာမည်မှာ .. ... '
ကြီးတော်တို့ တိုင်းပြည်လို တိုင်းပြည်ကလာတဲ့. . ကြီးကောင်ကြီးမားမှ ဖီလော်ဆော်ဖီဆိုတာကို ကျွမ်းဝင်ဖူးတဲ့ ပလေတို၊ အရစ္စတိုတယ်လ်၊ ဒေးကာ့ လော့ခ် စသည်ဖြင့် လူကြားထဲ မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်မဖြစ်ရအောင် ဖီလော်ဆော်ဖာနာမည်တွေကိုသာ ကျက်မှတ်ထားဖူးတဲ့ ကြီးတော်တို့ ပိန်းချက်၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲကြီးချက်ကတော့. . . . နာမည်ကြီး ဖီလော်ဆော်ဖာတွေ တွေးတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေမှသာ ဖီလော်ဆော်ဖီ လို့ ထင်နေတာကိုး။
Posted by မင်းသားကြီး at 05:380comments
ပို့ မတင်ဖြစ်တာတောင်ကြာပြီ ရှိစုမဲ့စု သူငယ်ချင်းတို့ ရေ ဒီနေ့ တော့ စာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်ရတယ်
ဆရာမောင်သစ်ဆင်းရဲ့ “ကြောက်စိတ်”ဆိုတဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ပါ ကျွန်တော်ကြိုက်တာနဲ့သူငယ်ချင်း
ကြိမ်လုံးအကြောင်းစဉ်းစားမိတိုင်းအထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀တုန်းက ကြုံခဲ့ရတာလေး တစ်ခုကို အမြဲသတိရနေမိပါတယ်။ မြန်မာစာ အချိန်မှာ ပင်ရင်း စကားပြေလက်ရွေးစင်ထဲက မင်းတုန်းမင်းနှင့် ငါးခြောက်ပြား ဆောင်းပါးကို သင်ပြီးစပေါ့။မင်းတုန်းမင်းငယ်ရွယ်စဉ် မောင်လွင်ဘ၀က စံကျောင်း ဆရာတော် ဆီမှာပညာသင်ကြားခဲ့ရတယ်။တစ်နေ့မှာ အင်းသားကြီးငကြူးက ငါးခြောက်ပြားကြီး တစ်ပြားလာပြီး လှူတယ်။ ဆရာတော်က ငါးခြောက်ကို သိပ်ကြိုက်ပါသတဲ့။ ကျောင်းမှာကလည်း
ငါးခြောက်ပြတ်လပ်နေချိန်ဖြစ်တော့ ဆရာတော်က မောင်လွင်ကို ကျက်သရေခန်းထဲမှာသေသေချာချာ သိမ်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ ဆရာတော် ဆွမ်းဘုဉ်းပေး တဲ့အခါ မောင်လွင်ကို ငါးခြောက် ဖုတ်ခိုင်း တော့ ငါးခြောက်က ရှာမတွေ့တော့ဘူး။
ဆရာတော်ကတော့ လက်ဆေးပြီးနှမ်းဆီမွှေးမွှေးနဲ့ ရောက်လာမယ့် ငါးခြောက်ဖုတ်ကို စောင့်နေတာပေါ့.။ မောင်လွင်မှာ ဘယ်လိုမှ ရှာဖွေ မေးမြန်းစုံစမ်းလို့မရဘဲ ဗျာများနေခိုက် ဟဲ့...... ငလွင်မရသေးဘူးလား လို့မေးလိုက်တော့ ညှိုးညှိုးငယ်ငယ်နဲ့ပဲ ငါးခြောက်ပြားကြီး ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်း တင်လျှောက် ရတော့တယ်။ ငလွင်......လာခဲ့ လို့ ထားဝယ်ကြိမ်ကို ဆွဲပြီး ခေါ်လိုက်တဲ့ ဆရာတော်အသံက ကျောင်းသား အားလုံးရဲ့ နှလုံးသားကို ကန့်လန့်ဖြတ်ဝင်သွားပါသတဲ့။
ဟဲ့...ငလွင် နင်ဟာ ဘုရင့်သား၊ အကြောင်း ညီညွတ်ရင် နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ရမယ့်သူ။ ဒီလိုလူက ငါးခြောက်ပြား တစ်ချပ်ကိုတောင် လုံခြုံအောင် မစောင့်ရှောက်နိုင်ရင် နိုင်ငံကို နင်ဘယ်လို လုံခြုံအောင်
ဆရာ့မျက်နှာက နီပြီးတင်းလို့။ တစ်တန်းလုံးကို ဝေ့၀ဲပြီးကြည့်တယ်။ တစ်တန်းလုံး ကလည်း ငြိမ်လို့။ ဆရာ ဘာဖြစ် လာတာပါလိမ့်လို့ တွေးနေကြပုံပဲ။ ဆရာက ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကို ခေါ်ပြီး အတန်းရှေ့ ထွက်ခိုင်းပါတယ်။ နောက်ဆုံးခုံက ကျောင်းသားတစ်ယောက်ထွက်လာပါတယ်။ ဆရာက အဖြေလွှာတစ်ရွက်ကို ဆွဲထုတ်ပြီး အဲဒီကျောင်းသားကို ပေးလိုက်တယ်။ "ဒါ မင်းအဖြေလား"။ "ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ"၊ "အေး တစ်တန်းလုံး ကြားအောင် ဖတ်စမ်း" နည်းနည်း အံ့သြနေပုံနှင့် ကျောင်းသားက သူ့အဖြေကို ဖတ်ပါတယ်။ မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် စံကျောင်းဆရာတော်ရဲ့ ဆုံးမပုံကို မကြိုက်ကြောင်း။ ဆရာတော်ရဲ့ အဲဒီအချိန်က စိတ်ခံစားမှုဟာ တပည့်ကို လမ်းညွှန်ချင်စိတ်ထက် မိမိအလွန်တရာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ငါးခြောက်ဖုတ်ကို ဘုန်းမပေးရတဲ့အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဒေါသစိတ်ကပိုပြီး ကြီးမားနေနိုင်ကြောင်း၊ ပြီးတော့ ဒီကိစ္စဟာ ဒီလောက် ရိုက်နှက် အပြစ်ပေးစရာမလိုကြောင်း၊ နားဝင်အောင်ဆုံးမလျှင် ရပါလျှက်နှင့် သေရာပါ အမာရွတ်ထင်အောင် ရိုက်နှက်ခြင်းဟာ ဒေါသစိတ်ကြောင့် ဟု သံသယဖြစ်စရာရှိကြောင်း။ ဘုရားသားတော် တို့မည်သည် ရသတဏှာဖြစ် ဆွမ်းဘုဉ်း မပေးသင့်သည်ကို သတိရသင့်ကြောင်း၊ ဆရာကိုယ်တိုင်က ဤ၀ိနည်းကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ပါဘဲ တပည့်ကို ဆုံးမခြင်းမှာ စဉ်းစားဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ အသားနာမှ အရိုးစွဲမှတ်မည်လို့ထင်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် အပြစ်ပေးဆုံးမခဲ့ပေမယ့် မင်းတုန်းမင်း လက်ထက်မှာ အောက်မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ခုလုံးကို အင်္ဂလိပ် လက် ထိုးပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် ဒီဆုံးမနည်းဟာ မအောင်မြင် နိုင်ကြောင်း၊ အဲဒီလိုတွေ ဖြေထားတာဗျ။
ပထမဆုံး အမေးခံလိုက်ရတဲ့ ရှေ့ဆုံးခုံက ကျောင်းသားဟာ ရုတ်တရက် ဘာဖြေရမှန်း သိပုံမရဘူး။ အဖြေရှင်ကျောင်းသားကို ကြည့်လိုက် ၊ ဆရာ့ကို ကြည့်လိုက် ဘေးဘီကို ကြည့်လိုက်နဲ့။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာတော့ အဲဒီကျောင်းသားရဲ့ အဖြေကိုကြိုက်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့လိုခံစားမိတာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့လို မဖြေတတ်ဘူး။ သူ့လို ထောင့်စေအောင် မမြင်တတ်ဘူး။ ပြီးတော့ သူ့လို မဖြေရဲဘူး။ တစ်တန်းလုံး လိုလိုလည်း ကျွန်တော့်လိုဘဲထင်တယ်။ သူတို့ မျက်နှာတွေကို ကြည့်ရင်သိသာပါတယ်။
တကယ်တော့ ဆရာကမှန်သလား၊ မှားသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းနှစ်ခုကို မေးနေတယ် ဆိုပေမယ့် အမူအရာ၊ လေသံ၊ ဖန်တီးထားတဲ့ ၀န်းကျင် အငွေ့အသက်တွေက မှားတယ်လို့ ဖြေစမ်း၊ မဖြေရင် ကြိမ်လုံး လို့ပြောပြီးသား ဖြစ်နေပါပြီ။ ဆရာက ကျောင်းသားတွေကို လိမ်နေသလို သူတရားပါတယ် ဖြစ်အောင် သူကိုယ်တိုင်လည်း ပြန်လိမ်နေတာပါ။ ဒါကို အဲဒီကျောင်းသားလည်း သဘောပေါက်ဟန်တူပါရဲ့။ သူဖြေတာ မှားပါတယ် ဟုတ်ပြီ၊ နောက်တစ်ယောက် မှန်....အဲ...မှားပါတယ် နောက်တစ်ယောက် မှားပါတယ်
တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် မေးလာလိုက်တာ ကျွန်တော့်အလှည့်ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်
လူကုန်သွားတော့ ဆရာက အဲဒီကျောင်းသားကို နောက်ပြောင်မှုနဲ့ အတန်းထဲမှာ ရိုက်ပါတယ်။ ကြိမ်လုံးသံ တစ်ချက်ကြားရတိုင်း ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ် တစ်နေရာမှာ နာနာသွားသလိုပဲ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အရိုက်ခံနေရသလိုပဲ။ တစ်တန်းလုံးလည်း ကျွန်တော့လိုဘဲ ခံစားနေရမှာကပါ။ အဲဒီကျောင်းသားဟာ ကျောင်းပြောင်းသွားပါတယ်။ ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရဲတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ ဆုံးရှုံးလိုက်ပါတယ်။ ဆရာမှာ ဒီလိုတပည့်မျိုး ဆုံးရှုံးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးထဲမှာ အကြောက်မျိုးစေ့တွေ ပွားများလာပြီး အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ ကြောက်သီးတွေ တတွဲတွဲ၊ ကြောက်ပွင့်တွေ တဝေေ၀နဲ့။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲဘို့ လိုအပ်တဲ့ ပြသနာတွေ၊ အခက်အခဲတွေ ရှိရင်လည်း ကျွန်တော်ဘာမှ မပြောရဲဘူး။ အပြုဘက်က မြင်ပြီးပြောင်းလဲပစ်လိုက်ရင် အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာ သေသေချာချာကြီး သိမြင်နေပါလျှက်ကနဲ့ အထက် လူကြီးမကြိုက်မှာစိုးလို့ ကျွန်တော်ဘာမှ အကြံမပြုရဲဘူး။ ကျွန်တော့ဆီက အကြံ၊ အတွေး၊ အမြင်၊ သဘောထားတွေကိုလည်း ဘယ်သူကမှ မတောင်းကြဘူးလေ။
သင်ခဲ့ရတဲ့ ပညာတွေ စာအုပ်ထဲ ပြန်သွားလည်း သွားပေရော့ပေါ့။ ဟောဒီ ပရောဂျက်ဟာ ဘယ်နေရာမှာ မှားနေတယ်လို့ ကျွန်တော် မြင်ပေမယ့် ဒါဟာ ပြောရမယ့် ကိစ္စလို့ ကျွန်တော် မထင်တော့ဘူး၊ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အဲဒါ ကျွန်တော်မှန်တယ်လို့ ထင်လာတယ်။ ကျွန်တော့အထက် အဆင့်ဆင့်၊ အောက်အဆင့်ဆင့်က လူတွေအာလုံးက ဒါကို မှန်တယ် ထင်လာကြရင်ဖြင့်......ဌာန မနာဘူးလား တိုင်းပြည်မနာဘူးလား၊ ပညာရပ်အမြင်နဲ့ ကြည့်ရင် တစ်ကမ္ဘလုံးနဲ့ လူသားအားလုံး နာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်....... ကျွန်တော်
"တော်...... စာအုပ်ထဲက ဟာတွေလာပြောမနေနဲ့၊ ပန်းကန်တစ်လုံး ဘယ်လောက် အောက်မေ့လို့လဲ၊ ရှင့် ၀င်ငွေက ဘယ်လောက်..............................."
ရွယ်ထားတဲ့ တုတ်အောက်ကနေပြီး သားကြီးက အကြောက် မျက်လုံးများနဲ့ ကျွန်တော့်ကို အားကိုးတကြီး ကြည့်နေရှာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖေဖေ့မျက်လုံး တွေကလည်း သားရဲ့ မျက်လုံးတွေလိုဘဲ ဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီကောလား သားရယ်.......။
Posted by မင်းသားကြီး at 12:12 1 comments
ကျွန်တော်လည်း စာမေးပွဲတွေ ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ ပျင်းပျင်းရှိလာတယ်ဗျ
ဒီတော့ ကျွန်တော် ဥာဏ်စမ်းလေး တစ်ခုလောက် မေးကြည့်မယ်
သိပြီးသားလူတွေကတော့ သည်းခံပေးကြပါ ... :)
ဒီဥာဏ်စမ်းက အမေရိကန် Harvard တက္ကသိုလ်ရဲ့ ၂၀၀၁ခုနှစ်မှာ Institute of
Science ဂုဏ်ထူးတန်းကိုမေးတဲ့ မေးခွန်းလိုဆိုထားပါတယ်။
လူတော်တွေတက်တဲ့ ဟားဗတ်ရဲ့မေးခွန်းကို ဖြေကြည့်ကြရအောင်...သူငယ်ချင်းတို့အားလုံးမှာ ဟားဗတ် တက်နိုင်
Posted by မင်းသားကြီး at 22:589comments
စစ်ပွဲဟူသည် နိုင်ငံရဲ့ဝါဒကို တစ်နည်းတစ်ဘာသာအားဖြင် ဆက်လက်
မိမိရဲ့ ၀ါဒလမ်းစဥင်္အရ အခြားတိုင်းပြည် တစ်ပြည်ကို လွှမ်းမိုးရန် ကြိုးပမ်းရာတွင်
အခြားနည်းလမ်းဖြင့် မအောင်မြင်သောအခါ လက်နက်အင်အားဖြင့်ဖိ လာတက်သည်။
ထိုနည်းအတူ နိုင်ငံေ၇း အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုသည် မိမိရဲ့ ၀ါဒလမ်းစဥင်္အရ တိုင်းပြည်
အတွင်း လွှမ်းမိုးရန် ကြိုးပမ်းရာ အခြားနည်းလမ်းဖြင့် မအောင်မြင်သောအခါ ထိုတိုင်းပြည်
အစိုးရအား လက်နက်အားကိုးဖြင့် ဖြုတ်ချရန် ကြိုးစားလာတက်သည်။
ထိုအခါ စစ်ပွဲဟူသည် ပေါ်ပေါက်လာရသည်။
မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ စစ်ပွဲ စပြီဆိုသည်နှင့် ပထမဆုံးသော ကျည်ဆန်သည်
ထိုတိုင်းပြည်၏ စစ်သားအား ချိန်ရွယ်ပီး ပစ်လွှတ်လိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ထို့ ကြောင့် အရေးအခင်းကို ဦးဆုံးပြေးပီး တွေ့ ရသူသည် စစ်သားပင် ဖြစ်ရသည်။
ထိုစစ်သားအဖို့ မှာတော့ မည်သူက မှားသည်၊ မည်သူက မှန်သည်ဟူသော အချက်သည်
ထိုစစ်သားသိဖို့ ၊ နားလည်ဖို့ ၊ ယုံကြည်ဖို့တစ်ခုသာရှိသည်။ အဲဒါက မှားသည်ဖြစ်စေ၊
မှန်သည်ဖြစ်စေ ငါ၏ တိုင်းပြည်နှင့် ငါ၏ တပ်မတော်အောင်နိုင်ရေးပဲဖြစ်သည်။
Posted by မင်းသားကြီး at 11:582comments
နေ ကျချိန်ညနေခင်း တစ်ခုမှာပေါ့ဗျာ ကျောင်းပရိဝုဏ်ထဲမှာတော့ စာအံသံလေးတွေညံညံစီစီနဲ့ ပေါ့ ။
ဒုတိယတန်း စာသင်ခန်းတစ်ခုထဲမှာ ဆရာက ကလေးတွေကို ကျောင်းဆင်းခါနီး အချိန် ဗဟုသုတအနေနဲ့ 
“ဒီကမ္ဘာကြီးရဲ့ အလေးချိန်က ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲ ဆရာကြီး”
မေးခွန်းတစ်ခု ဒုတိယတန်းကျောင်းသား ချာတိတ်က မေးတယ်။ ဆရာလုပ်သူခဗျာ နည်းနည်းတော့ နင်သွား
တာတယ် ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ဘယ်ဖြေနိုင်မှာလည်း ဒါပေမဲ့ ဆရာက ဆရာပါပဲ ... :)
သူသင်ကြားလာခဲ့ရတဲ့ ပညာရေး နည်းစနစ်များထဲက အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကို ထုတ်သုံးလိုက်ပါတယ်။
“ဒီမေးခွန်းက အင်မတန် စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းတဲ့ မေးခွန်းပဲ ၊ ကဲ..ဒီတော့ မနက်ဖြန်ကျရင်
ဒီမေးခွန်းကို ဘယ်သူ ဖြေနိုင်မလဲဆိုတာ ကြည့်ကြ ရအောင်”
ဆရာဖြစ်သူ ပုစ္ဆာကို ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းလေးကို လျှပ်တပြတ်လေး စဉ်စားလိုက်တာပါ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
သူ့ တပည့်တွေရှေ့ မှာတော့ သူ့ ရင်တွေ ကော့နေချင်သေးတာပေါ့ ။ ဒီလိုနဲ့ညနေ ကျောင်းဆင်းချိန်
ဆရာဖြစ်သူ မြို့ နယ်စာကြည့်တိုက် လေးဆီ တစ်ချိုးတည်း တန်းပြေးတော့တာပဲ ။ တော်တော်လေး
ကြိုးစားပန်းစား ရှာဖွေ ဖတ်ရှုပြီးတော့ သူ အဖြေကို တွေ့သွားပါသည်။ လန်းဆန်းတဲ့ အပြုံးတွေနဲ့ အတူ ။
နောက်တစ်နေ့ကျောင်းတက်ချိန်မှာတော့ ဆရာဖြစ်တဲ့သူ ကျောင်းသားတွေရှေ့မတ်မတ်ကြီး ရပ်ပြီးတော့
“ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အလေးချိန်ကို သိခဲ့ကြပြီလား တပည့်တို့ ”
ကလေးတွေဆိုတာက ကျောင်းကပြန်ရောက်တာနဲ့ လွယ်အိတ်ကို တိုင်မှာချိတ်ပြီး ကမျင်းကြတဲ့
အမျိုးဆိုတော့ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်လိုက် ဆရာ့ကိုကြည့်လိုက်နဲ့ဖြေနိုင်သူ နတ္တိ ။
အဲ့အချိန်ကြတော့မှ ဆရာဖြစ်သူဟာ မိန့် မိန့် ကြီးပြုံးလိုက်ပြီး သူ ကြိုးစားပမ်းစား ရှာဖွေတွက်ချက်လာတဲ့
အဖြေကို ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာနဲ့ပြောပြလိုက်တယ် ...
“ #$%@ #!% ”
သူရဲကောင်း တစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရသလို ကလေးတွေရဲ့ လေးစားတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ၊ ဆရာ့ရဲ့ ပြုံးရွှင်နေ
တဲ့မျက်နှာနဲ့၊စာသင်ခန်းလေးဟာ တဒင်္ဂလေး ငြိမ်သက်သွားခဲ့တယ်။တိတ်ဆိတ်မှုကို ဖြိုခွင်းလိုက်တာက
ကမ္ဘာကြီး ဘယ်လောက်လေးလည်းဆိုတဲ့ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ အမောင်ကျောင်းသားကြီးပဲပေါ့။
သူရဲ့ လက်ညှိုးလေးထောင်ပြီးမေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းကြောင့်
ဆရာဖြစ်သူခဗျာ ထိုင်ခုံပေါ် အရုပ်ကြိုးပြတ်။
မေးလိုက်ပုံက ... .. .
“အဲဒါ လူတွေ အပါအ၀င်လား၊ လူတွေ မပါဘဲနဲ့လား ဆရာကြီး”
“ တိန် ”
Posted by မင်းသားကြီး at 01:575comments
ယုန်ကလေးက နားရွက်ထောင် .. ပညာရှိယောင်ဆောင် ~~~
ကြောင်ကလေးက လက်သည်းဝှက် .. ချောင်းလိုက်ရတဲ့ကြွက် ~~~
ရွှေဇီးကွက်ရဲ့ အိနြေ္ဒ .. ဘုရင်ကြီးလိုနေ ~~~
မိုးလေ၀သဗေဒင်ဟော .. တောက်တဲ့ ကိုလူချော ~~~
ပြောတိုင်းယုံတဲ့ ပုတ်သင်ညို .. ခေါင်းညိမ့်လှသကို ~~~
ရွှေကျီးညို သာပါစ .. ဧည့်သည်လာပါစ ~~~~~
မေမေဆိုပြဘူးတဲ့ ကဗျာတစ်ချို့ တစ်လေ၊ ပုံပြင် တစ်ပိုင်းတစ်စလေးတွေနဲ့အပူအပင်မရှိတဲ့
ကလေးဘ၀လေးကို တစ်ခါတစ်လေ တမ်းတမိရုံလေးပါပဲ ဒီထက်ဘာမှမပိုခဲ့ပါဘူး ... ... ... ။
တစ်ကယ်လိုများ ဒီကဗျာလေးထဲကလို လူလောကကြီးမှာလည်း ဟန်ဆောင်မှုတွေ
လှည့်စားမှုတွေ အမှန်တကယ်ရှိမှန်း ငယ်ငယ်ကတည်းက သိခဲ့ရင်
ကျွန်တော် ... ... ...
လူကြီးဖြစ်ချင်ခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး ... ... ... ။ ။
Posted by မင်းသားကြီး at 01:457comments
စိတ်ထဲမှာ သ၀န်တိုမိမှာပဲ ....
ကိုယ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေကို သူများတွေက အပြောင်အပျက် ပြောနေရင်
စိတ်ထဲမှာ သ၀န်တိုမိတာပါပဲ ....
ဒါပေမယ့် တွေးကြည့်ဖူးသလား ....
သ၀န်တိုခြင်းဆိုတာ သင်တို့ချစ်ခြင်းရဲ့ ခိုင်မြဲမှုကို ပါးပါးလေး ကပ်လှီးနေတဲ့
သ၀န်တိုခြင်းရဲ့ တခြားဘက်မှာ ဘာရှိမယ်လို့ သင်တွေးဖူးလဲ ...
အရာရာတိုင်းမှာ Limit ဆိုတာရှိတယ် ....
သိပ်ချစ်လို့ သိပ်သ၀န်တိုတယ် ...
မည်သူတဦးတယောက်ကိုမျှ သ၀န်မတိုပါနဲ့လို့ မတားပါဘူး ....
ဒါပေမယ့် တခြားတဖက်မှာ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထပ်တူထပ်မျှ
စော်ကားနေတယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုအပ်မယ်ထင်ပါရဲ့ ....
ဘာလို့များ တကွက်ကျော် ... ဒါမှမဟုတ် တကွက်နောက်ကျပီး
သိပ်ချစ်လို့လို့တော့ ခေါင်းစဉ်မတပ်ပါနဲ့လား ...
ထိုအရာက သိပ်ချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူး ...
သင့်အချစ်အပေါ် သင်သံသယ၀င်နေတာပါ ....
မိမိကိုယ်ကို မလုံခြုံခြင်းက သင့်ချစ်သူကို သင့်အနားကနေ
အဝေးကိုခေါ်သွားစေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိသင့်တယ်ထင်ပါတယ် ...
By: Matsuri Pan
Posted by မင်းသားကြီး at 12:114comments
ကျွန်တော်နဲ့A-levels မေးခွန်း ၄ ခု
ဒီမေးခွန်း ၄ခုကို website တစ်ခုမှာ မြင်ဖူးတာ တော်တော်ကြာပြီး ။ A-levels ကို ကျွန်တော် မဖြေဖူးတော့ အဲဒါ တစ်ကယ့် မေးခွန်းပုံစံလား ၊ ဒီလိုမေးခွန်းတွေ တကယ်မေး တတ်လား ဆိုတာတော့ ကျွန်တော် မသိဘူး ။ ခွင့်ပြုချိန်က ၁ မိနစ် ဆိုတော့ မဖြစ်နိုင် ဘူးလို့ထင်တာပဲ ။ တကယ့် မေးခွန်းသာဆို တော်တော် မလွယ်တာပဲ ။
ဒီမေးခွန်း ၄ ခု ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန် ၁ မိနစ်ထက် အများကြီး ကျော်ပြီး ကျွန်တော် စဉ်းစားခဲ့ ပေမဲ့ စိတ်တိုင်းကျတဲ့ အဖြေ တစ်ခုမှ မရခဲ့ဘူး ။ အဖြေတွေ ကလဲ မပါတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ခန့် မှန်း ထားတဲ့ အဖြေတွေက မှန်လားမသိ ၊ မှားလားမသိနဲ့တော်တော် ခေါင်းစားခဲ့တယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ် လောက်က website တစ်ခုမှာ ဒီမေးခွန်းတွေကို အဖြေတွေနဲ့တွေ့ လိုက်လို့အဖြေတွေကို အောက်မှာ တင်ထားတယ် ။ မေးခွန်းတွေကို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် အရင် ဖြေကြည့် ကြပြီးမှ အောက်က အဖြေကို ကြည့်ကြပါ ။
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုတွေဖြေထားတယ်ဗျာ အဖြေမှန်တွေက ဟိုးအောက်ဆုံးမှာနော် ကျွန်တော်ဖြေထားတာတွေကို အဖြေမှန်ထင်နေဦးမယ် .. :PP
မေးခွန်း နံပတ် ၁ အတွက် ကျွန်တော့် အဖြေက...
ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားပုံက...
မေခွန်း နံပတ် ၁ ကို မြင်တာနဲ့၆ ခုမြောက် ကွက်လပ်က T ဖြစ်ရမယ် လို့ကျွန်တော် တန်းတွေး လိုက်တယ် ။ ဘာလို့အဲဒီလို တွေးမိ လိုက်တာလဲ ဆိုတော့ မေးခွန်းမှာ logical way လို့ပြောထားတယ်လေ ။ T က ကွက်လပ် တစ်ခုကျော်စီမှာ ရှိနေတော့ ၆ ခုမြောက်က T ဖြစ်ရမှာပေါ့ ။ ကျန်တဲ့ ကွက်လပ် ၂ ခုကိုတော့ တော်တော်နဲ့စဉ်းစားလို့မရဘူး ။ M နဲ့W ကြားမှာ စာလုံး ၉ လုံးခြားပြီး W နောက်မှာက စာလုံး ၃ လုံးပဲ ကျန်နေတော့ စာလုံး အရေအတွက်နဲ့ခြားထားတာလဲ မဖြစ်နိုင်ဘူး ။ နောက်ဆုံး စဉ်းစားမိ တာက M ကို ပြောင်းပြန် လုပ်လိုက်ရင် W ရတယ်လေ ။ M နဲ့W ကို ပြောင်းပြန် လုပ်ပြီး T နဲ့ခြားပြီး တစ်ခုကျော် စီ ထည့်ထားတာ ဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီး အပေါ်က အဖြေကို စဉ်းစား မိတယ် ။ တခြား ဖြစ်နိုင်တဲ့ အဖြေတွေကိုလဲ စဉ်းစားလို့မရတာနဲ့အဲဒါကိုပဲ အဖြစ် နိုင်ဆုံးလို့သတ်မှတ် လိုက်တယ် ။
မေးခွန်း နံပတ် ၂ အတွက် ကျွန်တော့် အဖြေက...
စိတ်နဲ့ဟိုနေရာမှာ မျဉ်းကြောင်းလေး ခြစ်ကြည့်လိုက် ၊ ဒီနေရာမှာ ခြစ်ကြည့် လိုက်နဲ့ကျွန်တော် အချိန်တော်တော် ကြာအောင် စဉ်းစားပါတယ် ။ ညီမျှခြင်းရဲ့ဟိုဖက်နဲ့ဒီဖက်ကို ညီအောင်ညှိုဖို့ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားလို့မရတဲ့ အဆုံး ၊ အပေါ်က အဖြေကို အဖြစ်နိုင်ဆုံး အဖြေလို့ကျွန်တော် သတ်မှတ်လိုက်တယ် ။
မေးခွန်း နံပတ် ၃ အတွက် ကျွန်တော့် အဖြေက...
မေးခွန်းမှာ Write anything ဆိုပေမဲ့ အပေါ်က မေးခွန်းတွေ ပုံစံအရ ကိုယ်ကြိုက်တာ တစ်ခုခုကို ရေးလို့ပြောတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ။ Anything ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ရေးခိုင်းတာ ဖြစ်မယ် ။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ရေး ဆိုရင်လဲ anything ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ရေးလိုက်တာ မမှားဘူးလေ ။ အဲဒါနဲ့အပေါ်ကအဖြေကို အဖြစ်နိုင်ဆုံး အဖြေလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ် ။
မေးခွန်း နံပတ် ၄ အတွက် ကျွန်တော့် အဖြေက...
လိုင်း ၃ လိုင်းနဲ့လေးထောင့်ပုံ ရအောင်ဆွဲဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး ။ လေးထောင့်ပုံ ရဖို့က လိုင်း ၄ လိုင်း ရှိမှ ရမှာလေ ။ အဲဒီတော့ မေးခွန်း အောက်မှာ ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ လိုင်းကို အောက်ခံထားပြီး ဆွဲလိုက်တယ် ။ အပေါ်က အဖြေမှာတော့ ကျွန်တော် ဆွဲတဲ့ လိုင်း ၃ လိုင်းကို မြင်သာအောင် အရောင် မတူတာနဲ့ဆွဲထားလို့လေးထောင့်ပုံ မဟုတ်သလို ဖြစ်နေတာ ၊ အောက်ကလိုင်းနဲ့အရောင်တူအောင်ဆွဲလိုက်ရင် လေးထောင့်တုံး ပုံရတယ်လေ ။
အဲဒါတွေကတော့ ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတဲ့ အဖြေတွေပဲ ၊ ကျွန်တော် ဘယ် နှစ်ခု မှန်မယ် ထင်သလဲ ။ အောက်က အဖြေမှန် တွေနဲ့တိုက်ကြည့်ပါ ။
ကျွန်တော် ဘယ်နှစ်ခု မှန်တယ် ဆိုတာ မြင်ကြတဲ့ အတိုင်းပဲ ။ ကျွန်တော်ကပဲ ညံ့တာလား ၊ မေးခွန်းတွေ ကပဲ ခက်တာလား တော့မသိဘူး ။ ဒီမေးခွန်း တွေရဲ့အဖြေတွေကို သိနေတဲ့ သူဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် စဉ်းစားတဲ့ ပုံကို ကြည့်ပြီး ရယ်လွန်းလို့သေနိုင်တယ်... xD
သူငယ်ချင်းတို့ ရော ဘယ်နှစ်ခု မှန်လဲ... ... :)
ဒုတိယဆိုဒ်မှ ကူးယူတင်ပြပါသည် ... ။
Posted by မင်းသားကြီး at 01:52 1 comments